★မြန်မာ့အလင်း★: လူဘောင်ကြီးအတွက် တာဝန်ယူပါ
ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းဖြစ်တိုင်း နအဖ ပတ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ လိမ်ညာချက်ကို နားမယောင်ဖို့ လိုပါတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေလူမဆန်စွာ လုပ်နေတာကို သည်းမခံနိုင်လို့ ပေါက်ကွဲတဲ့ ကိစ္စဟာ နအဖနဲ့ ဘယ်လို ပတ်သက်လဲ? မြန်မာမလေးတွေကို ဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ကုလားကို ဆုငွေပေးတဲ့ကိစ္စ မခံမရပ်နိုင်လို့ အဓိကရုဏ်းဖြစ်တာ နအဖမှာ တာဝန်ရှိလား? တကမ္ဘာလုံးက မွတ်ဆလင်ကို ရွံမုံန်းနေတာလဲ နအဖကိုပဲ အပြစ်တင်မလား? ကျနော်တို့ ဆီပုံးမှာ ကုလားတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန် စသဖြင့် ဟန်ဆောင်ပြီး လိမ်ညာ ပြောဆိုနေတာ မြင်တွေ့နေရတာပဲ။ အကျဉ်းသားတွေကို သင်္ကန်းဝတ်ပြီး မွတ်ဆလင်တွေကို ရိုက်ခိုင်းတယ်ဆိုတာ ကုလားတွေအပြောပါ။ ကုလားစကား ယုံသင့်သလား?
ရှမ်း၊ ကချင်၊ ကယား၊ ရခိုင်၊ ဗမာ၊ ခရစ်ယာန်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ နအဖ၊ ဒီမိုစတဲ့ အစွဲတွေကို မေ့ဖျောက်ပါတော့။ ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့အချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ ပြဿနာက ညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်။ ရခိုင်နဲ့ ဗမာ မကျေနပ်လို့ ခေါင်းဖြတ်သတ်တယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ခရစ်ယာန် ဘယ်လောက်ပဲ မုံန်းနေပါစေ အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်တဲ့ အထိ မရက်စက်ပါဘူး။ မွတ်ဆလင်ကသာ ဘုံရန်သူဖြစ်ပါတယ်။ ကုလားကို လူမျိုးရေးအရ နှိပ်ကွပ်ဖို့ပြောတာ မဟုတ်ပါ။ ယုတ်ညံ့လွန်းတဲ့ မွတ်ဆလင် ၀ါဒကြီးကို အားလုံးက ညီညွတ်စွာ ဆန့်ကျင်ဖို့ ပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမို၊ နအဖနဲ့ မွတ်ဆလင်
မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ ဗျူဟာကတော့ လူသတ်၊ မုဒိမ်း၊ လိမ်ညာ၊ ကောက်ကျစ်၊ ယုတ်မာမှု စတဲ့ နည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုလူကျင့်ဝတ်နဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ဝေဖန်ပြောဆိုလာပြီဆိုရင် မဖြေရှင်းပါဘူး။ တောင်းပန်မှုလဲ မလုပ်ပါဘူး။ တခြားဘက်ကို အာရုံလွှဲပါတယ်။ မိုဟာမက် သူ့ချွေးမနဲ့ ဖေါက်ပြန်တဲ့အကြောင်း ဆွေးနွေးရင် မြတ်ဗုဒ္ဓကို အဓိပါယ်မဲ့ ဆော်ကားပါတယ်။ မွတ်ဆလင် လူသတ်တဲ့အကြောင်းပြောရင် ဟစ်တလာလဲ လူသတ်တာပဲ ဆိုပြီး ပြောပြန်တယ်။ မြန်မာ့အရေးမှာတော့ နအဖ ရက်စက်တာကို အဓိကအသုံးပြုပြီး အာရုံလွှဲပါတယ်။ ဒီမှာ နအဖနဲ့ မွတ်ဆလင် ဘယ်ဟာက ပိုပြီး အန္တရယ်ကြီးလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြရအောင်လားဗျာ။
သတင်းတွေမှာ ကြားနေရတဲ့ မုဒိမ်းကျင့်မှုတွေနဲ့ လူသတ်မှုတွေဟာ နအဖ စေခိုင်းချက်အရ စစ်သားတွေ လုပ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အနောက်ဖက်က စစ်တပ်တွေလဲ ရှေ့တန်းမှာ ဒါမျိုးတွေ လုပ်တတ်ပါတယ်။ KNU၊ KIA တို့လဲ အရပ်သားတွေကို သတ်ဖြတ်နေတာပဲ မဟုတ်လား။ ဒီဖြစ်ရပ်တွေရဲ့ အဓိက တရားခံဟာ ပြည်တွင်းစစ်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းစစ်ရှိနေတရွေ့ အဲဒါတွေလဲ ဆက်ဖြစ်နေမှာပဲ။ နအဖကို အပြစ်တင်တာထက် ပြည်တွင်း စစ်ကို အဆုံးသတ်အောင် ကြိုးပမ်းချင်းသည်သာ အကောင်းဆုံးပါ။ (နအဖရဲ့ အဓိက အပြစ်ဟာ ပြည်တွင်းစစ်ကို သက်ဆိုးရှည်အောင် လုပ်ထားခြင်းလို့ပဲ မြင်ပါတယ်)
နအဖက မုဒိမ်းကျင့်ပါ၊ လူသတ်ပါလို့ မတိုက်တွန်းပဲ သူရဲ့ စစ်သားတွေလုပ်သမျှ အပြစ်ကို တာဝန်ယူခိုင်း ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်ဘာသာက လူသတ်ဖို့ သင်ကြားထားပါတယ်။ Allah ဆိုတဲ့ အသံကြီးနဲ့ သတ်ဖြတ်နေတာ အဲဒီသင်ကြားချက်ကြောင့်ပါ။ မိုဟာမက်သင်ကြားချက်နဲ့အညီ မိန်းခလေးတွေကို မုဒိမ်းကျင့်နေပါတယ်။ ဘာကြောင့် မွတ်ဆလင်ဘာသာက အဲဒီကိစ္စကို တာဝန်မယူတာလဲ?
နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ဆိုးသွမ်းရက်စက်ပါစေ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ထက်ပိုပြီးမခံပါဘူး။ အင်မတန် ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ ကွန်မြူနစ်စံနစ်လဲ နှစ် ၅၀ အတွင်းပြိုကွဲခဲ့ပါတယ်။ မွတ်ဆလင် နှစ်ပေါင်း ၁၄၀၀ ရှိပါပြီ။ လူတွေကို သတ်ဖြတ်၊ ဒုက္ခပေးနေဆဲပါ။ ဘယ်အထိ ဆက်လက် တည်တံ့နေမလဲ မပြောနိုင်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် နအဖ ထက် ဦးစွာ အမြစ်ဖြုတ်ရမှာ မွတ်ဆလင်ဘာသာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမိုမြန်မာတချို့က မွတ်လင် အမြစ်ဖြုတ်ရေးမှာ ကူညီဖို့ အင်မတန် ၀န်လေးနေပါတယ်။ အခုချိန်မှာ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးလမ်းစဉ်မရှိသေးပါဘူး။ လမ်းစဉ်မရှိသေးတော့ ဘာမှ လုပ်စရာမရှိသေးဘူးပေါ့။ အခုလို အားလပ်နေတဲ့ အချိန်လေးမှာ ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒကြီး အမြစ်ဖြုတ်ရေးမှာ ပါဝင်ရင်း ကုသိုလ်ယူဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ တချို့က ဒီမိုကုလားတွေ ခွဲထွက်သွားမှာ စိုး၇ိမ်နေပါလိမ့်မယ်။ ခင်ဗျားတို့ သိဖို့က ကုလားတွေ ဒီမိုကရေစီလုပ်နေတာ စိတ်ကောင်းနဲ့ မဟုတ်ပါဘူး။ မွတ်ဆလင်ဘာသာနဲ့ သူတို့ကိုယ်ကျိုးအတွက် လုပ်နေတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ကုလားတွေ ထွက်သွားလဲ ဘာမှ လွမ်းစရာမရှိပါ။
နောက်ပြီး ဒီမိုခေါင်းဆောင်တွေ ရိုဟင်ဂျာအရေးမှာ ကုလားဖက်က ရပ်တည်တဲ့ကိစ္စအတွက် လူတွေက မကြည်မလင်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီအတိုင်းဆက်သွားနေရင် ဒီမိုကို လူထုက ထောက်ခံမှုနည်းသွားမှာပါ။ တကယ်လို့သာ မွတ်ဆလင် အမြစ်ဖြုတ်ရေးမှာ ကူညီမယ်ဆိုရင် လူထုအမြင်တွေ ရှင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် မွတ်ဆလင်ဝါဒ အမြစ်ဖြုတ်ရေးမှာ တက်ကြွစွာ ပါဝင်သင့်ပါတယ်။
ခရစ်ယာန်နဲ့ ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ
မွတ်ဆလင်မှာ sunni နဲ့ shitte ဂိုဏ်း ၂ ခုပဲ လူသိများပါတယ်။ တကယ်တော့ ဂိုဏ်းကွဲပေါင်း ၁၀ ခုအထက်မှာ ရှိပါတယ်။ Shiite က sunni သုံးတဲ့ Quran ကို အသိအမှတ်မပြုပါဘူး။ wahhabi တွေကတော့ Shitte Quran ကျမ်းဆိုရင် မီးတင်ရှို့တဲ့အထိပါပဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ နဲ့ ခရစ်ယာန်တွေမှာလဲ ဂိုဏ်းကွဲတွေရှိပါတယ်။ တချို့ကတော့ ဂိုဏ်းကွဲတာ ပြဿနာမရှိဘူးလို့ ပြောကြမှာပါ။ မွတ်ဆလင်က ဂိုဏ်းကွဲအချင်းချင်း သတ်ဖြတ်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့ ထေရ၀ါဒတွေက မယာယနဘုန်းကြီးကို မကန်တော့နိုင်တဲ့ အဖြစ်ပါ။ ထို့အတူပဲ ခရစ်ယာန်မှာလဲ catholic တွေနဲ့ တခြား ဂိုဏ်းတွေ အကြားမှာ အဆင်မပြေမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
ဒီတော့ . . . မြန်မာနိုင်ငံဟာ ခရစ်ယာန်တွေချည်းပဲဖြစ်သွားရင် တစည်း တလုံးထဲ ဖြစ်သွားမယ် ထင်သလား? လက်တွေ့မှာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ခရစ်ယာန် ဂိုဏ်းကွဲတွေ အချင်းချင်း ၀ါဒပြိုင်ကြမှာပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေချည်းဖြစ်သွားရင် ဗုဒ္ဓဘာသာ စည်ပင်လာမယ်ထင်သလား? သူဘုန်းကြီး၊ ငါ့ဘုန်းကြီး၊ သူ့ရိပ်သာ၊ ငါ့ရိပ်သာ အစွဲတွေက ပိုပြီးထင်ရှားလာမှာပေါ့။ လက်တွေ့ကျကျ ပြောရရင် ၀ါဒပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကတော့ ဘယ်တော့မှ ပြီးဆုံးမှာမဟုတ်ပါ။ ၀ါဒတစ်ခုတည်း ဖြစ်အောင် ကြိုးစားတဲ့သူဟာ မသေတဲ့ ဆေးကို ရှာသလိုဖြစ်နေပြီ။ ဒါတွေကြောင့် မိမိဘာသာကို တနိုင်ငံလုံး လွှမ်းမိုးအောင်လုပ်ခြင်းဟာ ဘာမှအကျိုးမရှိပါဘူး။ ဘာသာမတူတဲ့သူတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာနေတတ်အောင် မိမိတို့အသိုင်းအ၀န်းကို ပညာပေးခြင်းက အကောင်းဆုံးသာ ဖြစ်ပါတယ်။
သေချာတွေးကြည့်ပါ။ ခရစ်ယာန်ရှိနေတဲ့ အတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာ သန့်ရှင်းရေးကိုပင် အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။ ကျနော်တို့တွေဟာ ခရစ်ယာန်တွေ အပြစ်မပြောခံရအောင် ပိုပြီး မိမိဘာသာ သန့်ရှင်းရေးကို အလေးထားပါတယ်။ ခရစ်ယာန်တွေလဲ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရှိနေတော့ သူတို့လဲ အမှားမလုပ်မိအောင် ဂရုပိုစိုက်ရပါလိမ့်မယ်။ တနည်းအားဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုကြောင့် ရလာတဲ့ အကျိုးထူးလို့ ပြောရမှာပေါ့ဗျာ။ ဒါကလဲ တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက် ရိုးသားမှုနဲ့ စာနာမှုလေးတွေ ရှိဖို့တော့လိုပါတယ်။ ဥပမာ ခရစ်ယာန် အယူဝါဒကို ဝေဖန်ရင် အထိုက်အလျောက်ပဲ ကောင်းပါတယ်။ သိပ်များလွန်းရင် တဖက်ဘာသာဝင်တွေကို မထေမဲ့မြင်ပြုတဲ့ သဘောဖြစ်သွားပါတယ်။ ထို့အတူပဲ ခရစ်ယာန်တွေအနေနဲ့ ဘာသာရေးစည်းရုံးရင် တချို့ကိစ္စလေးတွေမှာ ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။ နာဂစ်မှာ လူတွေက မိသားစုသေကြေလို့ သောကရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာပြောင်းမှ ကူညီထောက်ပံ့မယ်ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းကတော့ မလုပ်သင့်ပါဘူး။
ဘာသာရေးဆိုတာ မေတ္တာနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအပေါ်မှာ အလေးထားပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ခရစ်ယာန်တွေ အချင်းချင်း နားလည် လေးစားတတ်အောင် စတင်ပြီးလုပ်သင့်ပါပြီ။ မိမိတို့ဘာသာဝင်တွေတိုးပွှားလာဖို့ထက် လူဘောင်ကြီးငြိမ်းချမ်းရေးကို အဓိကထား လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ အဲလိုလုပ်ဖို့ အခက်အခဲမရှိနိုင်ပါဘူး။ ဘာသာနှစ်ခုစလုံးမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ အစဉ်လာတွေ ရှိခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလား? နောက်ပြီး အကျင့်စရိုက်ဆိုတာ ကူးစက်တတ်တဲ့ သဘာဝရှိပါတယ်။ ဘာသာရေးအမြင်မတူတဲ့သူတွေကို လေးစားတတ်တဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပေါက်ဖွားလာတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေလည်း နိုင်ငံရေးဝါဒမတူတဲ့သူတွေကို လေးစားတတ်တဲ့ အကျင့်ကောင်းတွေ ရှိနေပါမယ်။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ နှစ်ပေါင်း ၆၀ လုံးလုံး ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး ပြဿနာ အရင်းအမြစ်ဟာ အမြင်မတူတဲ့သူတွေ အကြား လေးစားမှုမရှိခြင်းက အဓိကပါ။ (ကျနော်တို့ တင်ပြချက်မှန်ကန်လားဆိုတာ ခေါင်းအေးအေးထား စဉ်းစားကြည့်ပါ။ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့် အတွက် ဒီမိုကရေစီလိုချင်တယ်လို့ ပြောနေပေမယ့် မိမိနဲ့ အမြင်မတူတဲ့ ယူဆချက်အပေါ် သည်းခံနိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိရဲ့လား?)
အခုခေတ်လူတွေဟာ ငွေကြေးအပြိုင်ရှာပြီး တစ်ဦးချင်း ချမ်းသာမှုကိုသာ အလေးထားနေပါတယ်။ လူ့ဘောင်ကြီး သာယာရေးကို စိတ်ဝင်စားတာ လက်တဆုတ်စာ လူနည်းစုပါပဲ။ အဲဒီလက်တဆုတ်စာ လူနည်းစုကလည်း ဒီမို၊ နအဖ၊ ကရင်၊ ရှမ်း၊ ဗမာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်ဆိုတဲ့ တံဆိပ်အမျိုးမျိုးနဲ့ တကွဲတပြားစီ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်လည်း ရန်မှုနေပါတယ်။ အဲဒီလူတွေဟာ ငါ့တိုင်းရင်းသား၊ ငါ့ဘာသာ ၊ ငါ့ခေါင်းဆောင်၊ ငါ့ဝါဒ ဆိုတာထက် အမြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ လူ့ဘောင်တစ်ခုလုံးသာယာရေးကို အလေးထားမယ်ဆိုရင် တော်တော်ကို တန်ဖိုးရှိမှာပဲ။
ကုလားတွေကိုလည်း တစ်ခုတော့ ပြောချင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့တွေရဲ့ မွေးရပ်မြေဟာ မြန်မာပြည်ပါ။ ကုလားပြည် မဟုတ်ပါဘူး။ အာရပ်နိုင်ငံလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ မွတ်ဆလင်ဘာသာရဲ့ သင်ကြားချက်ကြောင့် ခင်ဗျားတို့မွေးဖွား ကြီးပြင်းတဲ့ မြန်မာ့လူ့ဘောင်ကို ဖျက်ဆီးနေပါတယ်။ သည်းခံနိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာကို ကျော်လွန်လာပါပြီ။ တကယ်လို့ ဘာသာရေးပြဿနာဖြစ်ပြီဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာ နေလို့မရ တခြားနိုင်ငံကလဲ လက်မခံနဲ့ အကြီးအကျယ် ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာ သတိထားမိပါသလား? ကျနော်တို့ ၂ ယောက် အကြံပြုချင်တာကတော့ မွတ်ဆလင်ဘာသာကနေ ထွက်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်၊ ဟိန္ဒူ ၊ ဂျူး စတဲ့ဘာသာတွေကို ပြောင်းပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူတကွ နေထိုင်စေချင်တယ်။ (ဘာသာမဲ့တော့ မလုပ်ပါနဲ့။ ဘာသာမရှိရင် လောကကြီးရဲ့ ဒဏ်ကို ခံနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး) ဒါ့အပြင် ကျနော်တို့ ၂ ယောက်နဲ့အတူတူ မွတ်ဆလင် အမြစ်ဖြုတ်ရေးမှာ ပါဝင် ကူညီပါ။ ကျနော်တို့နဲ့ လက်တွဲဖို့ မငြင်းဆန်မီနဲ့ ကျနော်တို့ အကြံကို မပယ်ချခင်မှာ မွတ်ဆလင်ဘာသာဟာ ခင်ဗျားတို့အတွက် အကျိုးရှိရဲ့လားဆိုတာ စဉ်းစားပါ။ မွတ်ဆလင်ဘာသာဟာ လူ့ဘောင်ကြီးအတွက် ရှိသင့်လားဆိုတာ စဉ်းစားပါ။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 12:57 AM